माग नहुँदा पनि किन बढिरहेको छ डन्डीको भाउ? :: सुनिता सिटौला :: Setopati
सरकारले बजेटमार्फत डन्डी बनाउन चाहिने बिलेट स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। पहिले स्पन्ज आयात गर्दा पाँच प्रतिशत भन्सार र एक किलोमा एक रूपैयाँ ६५ पैसा अन्तशुल्क लाग्दै आएको थियो।
स्पन्ज आइरन आयात गरी केही उद्योगीले यहीँ बिलेट र छड उत्पादन गर्दै आएका छन्। केही उद्योगीले भने सिधै बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गर्दै आएका छन्। बिलेट आयातमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फत कर बढाएका छन्।
स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवै छडका कच्चा पदार्थ हुन्। एउटा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर नलाग्ने र अर्कोमा कर बढेकाले डन्डी उद्योगीहरू नै यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। त्यसको असर भने उपभोक्तालाई परेको छ।
बजेटपछि केही उद्योगले छडको मूल्य बढाएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार बजेटपछि एक/दुई रूपैयाँ गर्दै छडको मूल्य बढिरहेको हो। पछिल्लो समय डन्डी किलोमा चार रूपैयाँसम्म बढेको न्यु कटुवाल डन्डी उद्योगका सञ्चालक मोहन कटुवाल बताउँछन्।
सरकारको नीतिले मूल्य घट्न पर्नेमा झन् बढ्दै गएकामा आफू अचम्मित भएको उनले बताए।
पहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य देखाएर चर्को भाउ लिएको र अहिले बढाएको करको भार पनि उपभोक्तालाई नै पर्ने उनी बताउँछन्।
असोज र कात्तिक दुई महिना दसैं-तिहारका कारण निर्माण काम एकदमै कम हुन्छ। त्यसमाथि बर्खा सकिएको छैन। यो छडको माग नहुने समय हो। यो समयमा मूल्य बढ्न नपर्ने कटुवालको भनाइ छ।
'माग भएको समयमा त डन्डीको मूल्य एक सय नौ रूपैयाँसम्म पुर्‍याए,' उनले भने, 'अहिले मूल्य बढ्नु पर्ने कारण नै छैन। कर बढे पनि त्यो उद्योगीले उपभोक्ताबाटै असुल्ने हुन्।'
साखः टोर स्टिल्सका प्रबन्धक तथा नेपाल स्टिल तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साखःले स्पन्ज आइरन आयात गर्ने उद्योगीले मूल्य बढाएको बताए। स्पन्ज आयातकर्ताले सस्तो मूल्यमा दिन्छु भन्दै भन्सार दर शून्य गराएर एकलौटि रूपमा बजारमा मनोमानी गरको उनको आरोप छ।
'कर बढेपछि हामीले बिलेट आयात गरेका छैनौं, उत्पादन पनि गरेका छैनौं,' उपाध्यक्ष साखःले भने, 'उनीहरूकै सामान बजारमा छ। अनि मूल्य कसले बढायो त?'
बिलेट आयात गरी डन्डी उत्पादन गर्ने केही उद्योगले सरकारको राजस्व नीतिका कारण मूल्यवृद्धि भएको भन्नु सरासर झुटो भएको नेपाल स्टिल बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य घटबढ हुने भएकाले सोही बमोजिम नेपाली बजारमा पनि मूल्य घटबढ भइरहने बताए।
'बजेटको दिन प्रति मेट्रिक टन ५ सय ६५ अमेरिकी डलर रहेकामा अहिले ५ सय ८५ पुगेको छ,' अध्यक्ष न्यौपानेले भने, 'डलरको मूल्य पनि बढेको छ। यी कारणले प्रति किलो ३ रूपैयाँ ७० पैसा स्वतः बढ्न जान्छ।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १५, २०७८, ०४:५२:००